Kuyini Ukuduma Kwezulu? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Abantu abasha kuma-laptops don’Angazi ukuthi ichweba le-I-USB-Cliyini, nokuthi yini iUkuduma Kwezulu. Bazi kuphela ukuthi iMACBOOK PRO inechweba leUkuduma Kwezulu 3. Kalula nje, isikhombimsebenzisi seUkuduma Kwezulu kungenye indlela ye-I-USB TYPE-C
Okulandelayo, ake’s take a look at the technical specifications of Ukuduma Kwezulu 3.0
1. Ukuduma Kwezulu 3 support-Ukuduma Kwezulu, USB, DisplayPort (DP) and Power Delivery (PD) protocols on the I-USB-Cisixhumi.
2. The Ukuduma Kwezulu 3 interface uses the I-I-USB TYPE-Cokujwayelekile.
3. Kuze kufike ku-40Gbps ukudluliswa kwedatha ngejubane-kabili ngokushesha njengesizukulwane seRaiden 2.
4. I-two-way dual protocol (i-PCI Express ne-DisplayPort).
5. I-PCIe eneziteshi ezine uGen 3 ivumela ikhadi levidiyo ukuthi lixhumeke ngaphandle kwikhompyutha yamanothibhu ukukhulisa amandla okucubungula.
6. Iziteshi eziyisishiyagalombili i-DP1.2 (HBR2 ne-MST) -ixhasa izibonisi ezimbili ze-4K e-60Hz noma isibonisi esisodwa se-5K ku-60Hz.
7. Ukuxhaswa kwedatha ye-USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) -kuhambisana namadivayisi we-USB akhona nezintambo.
8. I-DP1.2-Iyahambisana nokubonisa okukhona kwe-DisplayPort, okokusebenza nezintambo. Abasebenzisi bangaxhuma i-DVI,I-HDMIfuthiI-VGAuqaphe nge-adaptha.
9. Uxhumano olwakhelwe ngaphakathi ku-10GbE full-duplex (ukugeleza kwezindlela ezimbili) phakathi kwamakhompyutha.
10. Daisy Chaining can link up to six devices to a single Ukuduma Kwezulu 3 port.
Umsebenzi ohlanganisiwe we-Raiden 3
Imininingwane ye-Raiden 3